Noderain’ny Manam-pahefana ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Pendjabi Persianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Umbundu Valencienne Xhosa Zoloa tzeltal
Tonga nijery ny fanorenana Efitrano Fanjakana iray any Sydney, any Aostralia, ny mpiasam-panjakana iray mba hahitana raha voahaja tsara ny fitsipika momba ny aro loza. Niaiky izy hoe tamin’ireo toerana rehetra nojereny, dia io no anisan’ny tsara indrindra, raha ny fanajana ny fitsipika momba ny aro loza no resahina. Efa ela, hono, no tsy nahitany toy izany.
Izao no tatitra nataony: “ Voara-maso tsara ilay toerana, ... madio be sady milamina. Mety tsara ny fidirana sy fivoahana avy ao amin’ilay toerana. Tsy misy mikasika amin’ny tany ny fil ary hazonin’ny faraingo plastika daholo. Efa vonona hampiasaina ny fitaovana famonoana afo ... Nanao akanjo lava tanana sy pataloa lava daholo ny mpiasa, ary nanao satroka sy solomaso fiarovana. ... Vonon-kanampy daholo izy ireo. ”
Hoy i Victor Otter, mpiandraikitra an’ilay toerana: “ Zava-dehibe amin’ny Vavolombelona ny fiarovana amin’ny loza. Mitandrina tsara izahay rehefa miasa, satria mitovy amin’ny an’Andriamanitra ny fiheveranay ny aina. Mahatonga ny mpiasa hiara-miasa tsara sy ho falifaly koa izany. Matetika aho no miramirana teny an-dalana hody, rehefa avy niasa mafy nandritra ny andro. ”
Vita tamin’ny Aprily 2012 ilay Efitrano Fanjakana, izay misy seza 127.